ह्वात्तै घट्यो कुखुराको मासुको मूल्य : प्रतिकेजी ११५ रुपैयाँ, अण्डाको कति ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पत्रपत्रिका > ह्वात्तै घट्यो कुखुराको मासुको मूल्य : प्रतिकेजी ११५ रुपैयाँ, अण्डाको कति ?
मासुको उत्पादन वृद्धि बढी र कम हुँदा हाल काठमाडौं लगायत अन्य शहरमा मासुको मागमा केही वृद्धि भएको छ । मासुको तुलनामा भने अण्डाको उत्पादन र विक्रीमा करिब सन्तुलनमा आएको छ ।
हाल बजारमा सानो अण्डाको मुल्य रू.२५५ प्रतिक्रेट छ भने ठूलो अण्डाको मुल्य प्रतिक्रेट रू. ३१५ छ । चाडबाड नजिकिएको र बन्दाबन्दी खुकुलोभएसँगै अण्डा र मासुको खपत बढ्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । आर्थिक अभियानबाट
२०७७ भदौ २० गते १४:२० मा प्रकाशित
एक साताका लागि बैंकिङ सेवा पूर्ण रुपमा बन्द रहने
अनुदानको मल बिक्री गर्ने व्यापारी पक्राउ भएपछि महासंघद्वारा बजार बन्द !
अदालतको स्टे अर्डरले सुशासन कायम गर्न अप्ठेरो पार्यो : मन्त्री अधिकारी
अटो शोमा बैंकले १ घण्टामै लोन दिने, हेर्नुहोस कसले कति दिनेछन् !
सिद्धार्थको २ लाख १४ हजार कित्ता सेयर लिलामी खुल्ला
जग्गाको विषयमा तपाईले जान्नैपर्ने अर्काे पाटो, बजारमा यस्तो भेटियो !